Fomba Hiatrehana Olana Lehibe | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fon Frantsay Goun Grika Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kazakh (Arabo) Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Mooré Myama Norvezianina Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Brezilianina Tetun Dili Tiorka Tiv Tseky Tsonga Turkmène Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Mety ho sendra olana daholo ny olon-drehetra. Hoy ny Baiboly: ‘Tsy ny haingam-pandeha no mahazo fandresena, ary tsy ny mahery no mandresy. Mety ho azon-tsampona izy rehetra amin’ny fotoana tsy ampoizina.’ (Mpitoriteny 9:11) Efa tratran’izany koa ny tanora sasany. Ahoana no niatrehan’izy ireo an’izany? Diniho ireto ohatra roa ireto:
Nisaraka i Dada sy Neny tamin’izaho 14 taona.
Nieritreritra aho hoe tsy nisaraka izany i Dada sy Neny, fa nila nisintaka kely fotsiny i Dada mba haka saina. I Neny tsinona tiany, ka nahoana moa no hisarahany? Izy ve dia hahafoy ahy?
Sarotra tamiko ny niresaka an’ilay izy tamin’olona. Tsy te hieritreritra an’ilay izy tsotra izao aho. Tezitra aho na dia tsy tsapako aza izany tamin’ireny fotoana ireny. Lasa be fanahiana lava aho, sady tsy dia nahita tory.
Voan’ny kansera i Neny ary maty tamin’izaho 19 taona. Izy anefa no namako akaiky indrindra.
Mafy tamiko ilay hoe nisaraka i Dada sy Neny, fa ny nahafatesan’i Neny no tena tsy zakako. Mbola malahelo azy aho hatramin’izao. Vao mainka sarotra amiko ny mahita tory, sady mbola be fanahiana foana aho.
Betsaka anefa ny zavatra nanampy ahy. Mampitandrina antsika mba tsy hitokantokana, ohatra, ny Ohabolana 18:1, ary miezaka mampihatra an’izany aho.
Izaho koa Vavolombelon’i Jehovah, dia miezaka mamaky boky sy gazety ara-baiboly. Mampahery be mantsy ireny. Anisan’ny nanampy ahy tamin’i Dada sy Neny nisaraka ilay boky hoe Manontany ny Tanora—Torohevitra Mahasoa. Tadidiko tsara ilay toko ao amin’ny Boky Faha-2 hoe “Ho Sambatra ve Aho na i Neny Irery aza no Mitaiza Anay?”
Betsaka ny andinin-teny manampy ahy tsy hanahy be loatra, fa ny tena tiako dia ilay ao amin’ny Matio 6:25-34. Nanontany i Jesosy eo amin’ny andininy faha-27 hoe: “Iza aminareo no mahay manalava ny androm-piainany, na kely monja aza, rehefa manahy?”
Tsy maintsy hisy zavatra ratsy hitranga foana eo amin ny fiainantsika. Hitako tamin’ny modely navelan’i Neny anefa hoe ny fomba iatrehantsika an’ireny fitsapana ireny no tena zava-dehibe. Nizaka ny mafy izy satria sady nisara-panambadiana no voan’ny aretina tsy nisy fanafany. Nifantoka tamin’ny zavatra tsara foana anefa izy, ary natoky an’Andriamanitra hatramin’ny farany. Tsy hohadinoiko mihitsy ny zavatra nampianariny ahy momba an’i Jehovah.
Eritrereto izao: Nahoana no afaka manampy anao hiatrika olana ny famakiana Baiboly sy boky ara-baiboly?—Salamo 94:19.
Hitako ny nahafatesan’i Dada tamin’izaho 17 taona. Izany no zavatra mafy indrindra teo amin’ny fiainako. Kivy be aho.
Tsy nino aho hoe tena maty izy. Rehefa nosaronana ilay faty dia mbola nieritreritra aho hoe tsy tena ny dadako no ao. Hozy aho hoe: ‘Mbola hifoha izy rahampitso ka.’ Nahatsiaro ho very tanteraka aho.
Vavolombelon’i Jehovah izahay mianakavy, ary tena nanohana anay ny fiangonanay tamin’ny maty i Dada. Nanateran-dry zareo sakafo izahay. Niteny koa ry zareo hoe afaka mijanona miaraka aminay. Tsy nandao anay mihitsy ry zareo. Tsy hoe vetivety ihany no nanaovan-dry zareo an’izany fa nandritra ny fotoana ela be. Hitako tamin’ilay fanampian-dry zareo anay hoe tena Kristianina ny Vavolombelon’i Jehovah.—Jaona 13:35.
Ny 2 Korintianina 4:17, 18 no tena nampahery ahy. Izao no voalaza ao: “Na mihelina sy maivana aza ny fahoriana, dia mitondra voninahitra bebe kokoa sy mandrakizay ho anay, raha mbola mampifantoka ny masonay amin’ny zavatra tsy hita izahay, fa tsy amin’ny hita. Fa mihelina ny zavatra hita, fa ny tsy hita kosa maharitra mandrakizay.”
Nisy vokany be tamiko io andininy farany io. Nihelina ihany ny fijalian’ny dadako, fa ny zavatra ampanantenain’Andriamanitra amin’ny hoavy kosa maharitra mandrakizay. Nahatonga ahy hisaintsaina ny fomba ampiasako ny fiainako sy hanitsy ny tanjoko ilay nahafatesan’i Dada.
Eritrereto izao: Nahoana no afaka manampy anao hanitsy ny tanjonao eo amin’ny fiainana ny olana mianjady aminao?—1 Jaona 2:17.
Hizara Hizara Ahoana no Hiatrehako Olana Lehibe?
ijwyp no. 45
Ahoana Raha Maty ny Dadanao na ny Mamanao?
Inona no Hanampy An’ireo Ankizy Nidonam-pahoriana?